Ukujonga kwangaphambili kukaFebruwari. I-Cole yokuqala kunye neMillás ezingcwalisiweyo | Uncwadi lwangoku
Ukujonga kwangaphambili kukaFebruwari. Cole wokuqala kunye neMillás ezingcwalisiweyo
Ezi Ukujonga kwangaphambili iya kuthengiswa ku Isiqingatha sikaFebruwari. Sele bewele ezandleni zam kwaye unyaka wam wokufunda awunakuba uqale ngcono. Imalunga ne Unodoli we-RAG (Unodoli we-RAG), ukusuka eBritish UDaniel cole, eyenza ukuqala kwayo okukhulu kuhlobo olumnyama. Kwaye kwakutshanje kumbhali wemveli ozinikeleyo UJuan Jose Millás, Makungabikho namnye oleleyo, eyandithatha iintsuku ezimbini kuphela. Omabini la mabali babe ngaphezulu ngokufanayo ibonakala njani. Masibone.
1 UDaniel cole
2 UJuan Jose Millás
2.1 Makungabikho namnye oleleyo
3 Ziyafana njani?
Uye 33 iminyaka, uhlala kwisixeko esisemazantsi se Bournemouth kwaye uyiparamedic. Le yeyakho inoveli yokuqala, owazalwa ngohlobo lwe Iskripthi kwaye sele ilungelelaniswe kuthotho lweTV. Ikwayile umthengisi ogqibelele kwangoko apho e-UK, France, Italy, Germany nase Holland. Ubhala incwadi yakhe yesibini.
Unodoli we-RAG (Unodoli we-RAG)
Isidumbu sixhonywe eluphahleni ngemisonto ethile, Yalatha umnwe ngakwifestile kwaye yenziwe nge kuthungwe iinxalenye zamaxhoba amathandathu Kaninzi. Umatshini wokushicilela wakhawuleza wayibiza ngokuba yiRagdoll, unodoli oyirag, into efumanekayo kwindlu engenanto e Londres Baye bakwazi ukuchonga intloko kuphela. ¿Bangobani? amanye amaxhoba amahlanu? Kwaye kutheni lomnwe ukhomba kwigumbi elingaphaya kwesitalato ukusuka Umcuphi uWilliam Fawkes, wonke umntu owaziyo njenge ingcuka?
Uxinzelelo oluvela kubaphathi bakhe Iyadi eNtsha yaseScotland kunye nokuhlukunyezwa kwe majelo Bazokwenza kube nzima kakhulu kwiWolf ekhawulezayo nengabonakaliyo kunye neqela lakhe kuphando lwabo. Ukuyikhupha phezulu ngokukhawuleza kuyavela Uluhlu lwamaxhoba amathandathu alandelayo ugwetyelwe ukufa. Ukugqiba umsebenzi, umbulali ubonakala ngathi uhlala ehamba phambili.
Sele bebeke izichazi ezininzi zesiqhelo: ukonwabisa, umlutha, ngoxinzelelo kunye neadrenaline ngaphandle kokuphumla. Ewe kunjalo ibafanele. Ndongeza nje ukuba, njengoko ndandisondela esiphelweni, ndandikulangazelela ngakumbi ukufika kwaye kwangaxeshanye ndivale incwadi ukuyirhoxisa kancinci. Ukuziva ungonwabanga kwaye kuyabonakala kuyindlela yokubonisa kunye nexesha elimnandi.
Ewe kunjalo, abo bethu sele benemili eninzi kwinoveli yolwaphulo-mthetho bayaqonda iimpembelelo ukusuka apha naphaya. Kule noveli ndikhumbule ubuhle Iingcuka ukusuka e-Italiya UDonato Carrisi. Kukho kwakhona izixhobo kunye nokujika, ziyimfuneko kwaye ziqhelekile kuhlobo olo, kanye ngenxa yeso sizathu zisasebenza. Ndiyamdumisa uYehova ukuphela okuyingozi, eya kothusa (okanye hayi) ngaphezulu kwesinye. Ikushiya a umva wokungaqiniseki ke ikwenza ukuba uziqwalasele ngokuziphatha. Ekugqibeleni, ukhetha ukwamkela enye ibali elihle kakhulu, i-cinematographic kunye nabalinganiswa abaqinileyo.
Kuncinci okunokuthethwa malunga neValencian Millás. Inkulu yeeleta zethu zangoku, ophumelele amabhaso amaninzi ( Iplanethi, i Nadal, iNational Narrative, iMiguel Delibes ...) kunye amagqabantshintshi kunye nentsebenziswano kwi El País okanye inkqubo Ukuphila de la Cadena Ser.kwaye umbhali wezihloko ezinje Igadi engenanto, Isizungu yile, Isixeko o Sukujonga phantsi kwebhedi, phakathi kwezinye ezininzi. Makungabikho namnye oleleyo Yincwadi yakhe entsha, ndingatsho ngokufutshane, kwaye ifundwe ngokusebenza komoya omnye.
Makungabikho namnye oleleyo
Ngoguqulelo lwezinto ezintle Ingqondo ye Turandot, Opera kaPuccini, njengesihloko, Le inoveli ixubana nesiqhelo kunye neyona nto intle, isikweko kunye nenyani kunye neentsomi, ingqondo kunye nobudenge. Ibali lothando, isizungu, isigqebelo kunye nohanahaniso, ubuvuvu kunye nesigqebelo kunye nokuzola okuqhubekayo. Ineenkwenkwezi uphawu lomntu obhinqileyo olungashiyi ngokungakhathali. Kwaye kukuba sonke sinokuziqonda njengoLucia ngamanye amaxesha okanye iimeko.
Kwaye oko Lucy Yiyo umqondisi wekhompyutha olahlekelwa ngumsebenzi kwaye athabathe isigqibo sokuba wetekisi en Madrid. Ke, ngamathuba okanye ikamva elalimlindeleyo ukusukela wayeneminyaka elishumi ubudala. Kwaye uyakuba ngumqhubi weteksi ukuze akwazi ukuthatha ummelwane wakhe ngenye imini IBraulio, anyamalale kwakamsinya emva kokudibana kwaye unethemba lokumfumana ngenxa yokuba emthandile.
Kanye, isandi sobomi bakho obutsha siya kuba Turandot, Ngubani oziva ophambili. Kwaye eyona aria yakhe yaziwayo, I-Nessum dorma (makungabikho namnye olalayo), iya kuhlala ikrazula zonke iinyembezi zovakalelo olukhulu. Kwaye uLucia kuthi. Ngelo thuba lishiyekileyo lithuba lilayishwe kakhulu isizungu, amaphupha, ukukhohlisa kunye nokudana okunzulu Ngubani phakathi kwabaxhasi bakhe kwezi zitrato zaseMadrid.
Ewe bayafana kuloo nto, ngaphandle kweziza zabo ezahluke kakhulu, bobabini bayabelana amanqaku amathathu ngokufanayo. Inye, ukusetyenziswa kwezixeko ezibini ezintle nezihle, ILondon neMadrid, njengemeko ezibonakalayo (ukuba zinyathelwe, kunjalo) kwaye zilungele ukubeka isenzo kunye nabalinganiswa ngamandla amakhulu. Abalinganiswa yingongoma yesibini kuba zigcina uhlala unomdla kuzo. Kwaye i okwesithathu bobabini ababhali, bohluke kakhulu kwi isitayela, bayabelana nangeyabo Ubumdaka kunye nemvelaphi yaso emnyama icace gca eCole kwaye ifakelwe isikweko eMillás. Kwaye bobabini bathatha umngcipheko nge iziphelo ezibini ezomeleleyo nezinomtsalane. Ke ndincoma ngokunyanisekileyo zombini ukufundwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ukujonga kwangaphambili kukaFebruwari. Cole wokuqala kunye neMillás ezingcwalisiweyo
Kutheni le nto ukubhubha ngobugebengu kusweleke kwiminyaka elishumi?